အဘယ်သို့ငါက FACEBOOK အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး - FACEBOOK က - 2019
သငျသညျအခြို့သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ် Facebook ပေါ်တွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးနှင့်အတူတွဲတစ်ခုလုံးကိုရှိပါကကအတော်လေးရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သို့သော်သင်သည်ထိုပေးပို့သူကိုသိရန်လိုအပ်ပါသို့မဟုတ်မဖျက်မီ, ဆန့်ကျင်ဘက်အမှု၌, လက်ခံရရှိသူက SMS, ဆဲသငျသညျမိမိတို့ကိုယ်မှသူတို့ကိုမဖယ်ရှားကြပါလျှင်ထိုသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လုံးဝမက်ဆေ့ခ်ျကို delete ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သာအိမ်မှာ။ လုံးဝသူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းကိုဖျက်ပစ်။
သင် SMS ကိုအရတစ်ချိန်ကသောအခါ, သင်ပေးပို့သူနဲ့ချက်တင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရသောထုတ်ဖော်, အထူးအပိုင်းအတွက်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။
လူမှုကွန်ယက်တွင် Authorized, သင်တို့ရှိသမျှမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ချင်သူနှင့်အတူ chat သွားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်တစ်ဦးချက်တင်နဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ်မည်သည့်လိုအပ်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခုအပိုင်းကိုသွား, အချက်တင်ရဲ့ထိပ်မှာပြသသောဂီယာအိုင်ကွန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "န့်သတ်ချက်များ"။ အခုဆိုရင်အသုံးပြုသူတွေနဲ့အပေါငျးတို့သစာပေးစာယူဖယ်ရှားပစ်ရန်အလိုရှိသောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။
အပြောင်းအလဲတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုယူရာပြီးနောက်, သင့်လုပ်ရပ်တွေကိုအတည်ပြုပါ။ အခုဆိုရင်သင်အသုံးပြုသူ၏အဟောင်းစကားပြောဆိုမှုမမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသင်တို့ကိုလည်းအထံတော်သို့စေလွှတ်ပြီကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။
Messenger ကို Facebook မှတဆင့်ဖျက်ခြင်း
Facebook ပေါ်မှာဒီအ messenger ကိုအသုံးပြုသူများအကြားရှိစာပေးစာယူမှလုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအရာအပြည့်အဝအပိုင်းအတွက်ချက်တင်ထံမှသင်တို့လှုံ့ဆော်ပေး။ , ကိုက်ညီတဲ့ပြောဆိုမှုများအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်သူတို့နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်မှအဆင်ပြေရှိပါသည်။ ဒီနေရာတွင် delete နှင့်စကားပြောဆိုမှုအချို့အစိတ်အပိုင်းများနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ, သင်သည်ဤတမန်သို့ရရန်လိုအပ်သည်။ အပိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "မက်ဆေ့ခ်ျများ"ထိုအခါကိုသွား "ဟုအဆိုပါ Messenger ကိုအတွက်အရာအားလုံး".
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာပေးစာယူလိုအပ်သော SMS ကိုရွေးနိုင်သည်။ ကဖယ်ရှားပစ်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုပေါ်လာသောအရာပြီးနောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအနီးတွင်သုံးမှတ်၏ပုံစံအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင်စာနယ်ဇင်းမတော်တဆဖြစ်ပျက်မပြုခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်, သင့်အရေးယူအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အတည်ပြုချက်ကို SMS စာတိုပြီးနောက်အပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်ပါမည်။
ဒီစာပေးစာယူအတွက်သန့်စင်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဒါ့အပြင်အိမ်မှာ SMS ကိုမဖျက်ပစ်, သင်သည်သင်၏တင်ပါတယ်များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုမှသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်မသတိပြုပါ။
ဗီဒီယို Watch: Facebookမ add friend နfollows ပတ. u200bနည. u200b. u200b (စက်တင်ဘာလ 2019).